Madaxweynaha Hirshabeelle oo Beesha Caalamka kala hadlay Arrimaha doorashooyinka -
Home News Madaxweynaha Hirshabeelle oo Beesha Caalamka kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Madaxweynaha Hirshabeelle oo Beesha Caalamka kala hadlay Arrimaha doorashooyinka
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Hir-Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa kulan dhinaca khadka Internet-ka ah la yeeshay xubno ka tirsan Xubnaha Beesha Caalamka.
Kulanka ayaa si weyn waxaa ay uga wada hadleen labada dhinac Muhiimadda wadahadalku uu leeyahay iyo baahida degdegga ah ee loo qabo in hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee dalku ay xal ka gaaraan khilaafaadka la xiriira doorashooyinka.
Xubnaha Beesha Caalamka oo uu horkacayay Wakiilka Qaramada midoobey ee Soomaaliya Amb, James Swan ayaa waxaa ay Madaxweynaha Hir-Shabeelle kala hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka iyo Arrimaha Hir-Shabeelle.
Wakiilada Beesha Caalamka ayaa todobaadyadaan waxaa ay wadeen kulamo ay la qaadanayaan saamileyda siyaasadeed ee dalka six al looga gaarao khilaafka hareeyay doorashooyinka Soomaaliya, iyada oo mudada xileheynta Madaxda dowladda ay ka harsan tahay wax ka yar laba todobaad.
Wakiilka Qaramada midoobey ee Soomaaliya Amb, Jemis Swan aya dhawaan tegay Magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Garoowe, isaga oo kulamo gooni gooni ah la qaatay Madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland, waxaana uu kala hadlay sidii xal looga gaari lahaa arrimaha doorashooyinka dalka.
Previous articleNapoleon’s story of the legendary Battle of Austerlitz is sold in Paris
Next articleWeerar lagu qaaday ciidamo marayay duleedka degmada Balcad